Otu esi emepụta ụbọchị ọmụmụ na vidiyo vidiyo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ime vidiyo nke ụbọchị ọmụmụ na nnọkọ ezinụlọ na-abụkarị ihe ọ ofụ ma na-eme ka ndị sonyere ya bịarukwuo nso, n'ihi na ọ ga-ekwe omume ịmeghachi ncheta ndị ahụ site na ịmalite vidiyo, ikekwe afọ ole na ole mgbe ihe omume ahụ gasịrị ma ọ bụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị. O di nwute na, obughi ndi oru nile mara ka esi aga njem na udiri ihe omume ma obu ngwa nke eji eme ubochi omumu na ihe nlere ndi ozo - ihe eji edezi vidiyo nke kpochapu nwere ike isiri ike iji, ya na oke ego.
Iji gboo mkpa nke onye ọ bụla na ntuziaka a, anyị achịkọtara ngwa kachasị mma, mmemme kachasị mma na saịtị kacha mma n'ịntanetị iji mepụta ụbọchị ọmụmụ na vidiyo vidiyo, na-enye naanị ngwaọrụ ndị dị mfe maka ndị ọrụ novice iji, yana ọbụlagodi ọ na-atọ ụtọ.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Etu esi anabata oriri na nkwanye vidiyo
Mepụta ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ vidiyo vidiyo
N'isiokwu ndị na-esonụ anyị ga-ahụ usoro nke iji mepụta ụbọchị ọmụmụ gị ma ọ bụ vidiyo nke vidiyo site na vidiyo ndị edere na ekwentị anyị ma ọ bụ igwefoto vidiyo dijitalụ (maka ndị nwere otu). Ebe ọ bụ na enwere ike ịmegharị vidiyo na ikpo okwu ọ bụla, anyị ga-egosi gị mmemme PC, ama na ngwa mbadamba, yana saịtị ntanetị, ka ị nwee ike ịmepụta vidiyo ụbọchị ọmụmụ site na ịmepe ihe nchọgharị ahụ.
Mmemme imepụta vidiyo ụbọchị ọmụmụ
Ihe omume anyị nwere ike iji na Windows mepụta ụbọchị ọmụmụ na vidiyo vidiyo EaseUS video nchịkọta akụkọ, budata n'efu na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Site n'usoro ihe omume a, anyị nwere ike ịmepụta vidiyo okike site na iji nhọrọ dị mma nke nzacha, mmetụta na ndị na-enyere aka ịmepụta vidiyo vidiyo, na-enweghị nnukwu ndị ọkachamara. A na-enye usoro ihe omume ahụ n'efu na ụdị ikpe ahụ, mana ọrụ niile dị maka ojiji ozugbo: n'eziokwu, nanị njedebe nke mmemme a bụ ọnụnọ nke akara mmiri na-egosipụta mmemme ahụ na njedebe mbupụ nke vidiyo emere (kachasị 720p), na-adịkarị mfe site na ịzụta ndenye aha.
Mmemme ọzọ bara ezigbo uru iji mee vidiyo nke nnọkọ na ụbọchị ọmụmụ bụ Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), budata n'efu maka Windows na Mac site na weebụsaịtị.
Site na mmemme a anyị nwere ike ịmepụta vidiyo mara mma nke ọma na ịpị ole na ole nke oke: n'ọtụtụ ọnọdụ ọ ga-ezuru ịdọrọ faịlụ vidiyo iji dezie usoro mmemme wee họrọ otu n'ime mmetụta dị ma ọ bụ ntụgharị, iji nwee ike ịme naanị otu video nke ụdị. Ihe omume n'efu nwere ọrụ niile dị mkpa iji mepụta vidiyo anyị mana na mpaghara mbupụ ọ ga-agbakwunye njirimara njirimara: ọ bụrụ na anyị chọrọ iwepụ ya, zụrụ ikike iji azụmaahịa.
Iji chọpụta mmemme mmezi ndị ọzọ bara uru maka ịmepụta ụbọchị ọmụmụ na vidiyo vidiyo, anyị na-atụ aro ka ị gụọ ntuziaka anyị Mepụta foto vidiyo, egwu, mmetụta dị ka ihe ngosi mmịfe eserese.
Ngwa iji mepụta vidiyo ụbọchị ọmụmụ
Anyị chọrọ ịmepụta ụbọchị ọmụmụ na vidiyo vidiyo site na ama ma ọ bụ mbadamba anyị, na-enweghị ịnyefe ọdịnaya iji dezie ya na PC? N'okwu a, anyị na-akwado ka ịnwale ngwa ngwa ozugbo. Quik, enwere n'efu maka gam akporo na iPhone / iPad.
Paswọdu na ngwa a bụ ọsọ, n'eziokwu ọ ga-ezuru ịhọrọ vidiyo iji dezie ma họrọ otu n'ime ọtụtụ usoro ndezi dị iji mepụta vidiyo dị mma. The ngwa na-enye gị ohere ka mmekọrịta a video na ihe ọ bụla nke music, ewepụtụ akụkụ nke video, ma tinye odide ma ọ bụ utu aha. Ngwa ahụ bụ n'efu, ịkwesighi ịkwụ ụgwọ ndenye ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
Ngwa ọzọ zuru ezu iji mepụta ụbọchị ọmụmụ na vidiyo vidiyo Magisto, enwere n'efu maka gam akporo na iPhone / iPad.
Iji ngwa a ị nwere ike ịmepụta vidiyo mara mma ma na-atọ ọchị na nkeji ole na ole, họrọ vidiyo vidio, họrọ otu n'ime usoro ndozi dị njikere (enwerekwa usoro maka ụbọchị ọmụmụ na ezumike n'ozuzu ha), tinye akwụkwọ mmado na nsonaazụ bupu vidiyo ọhụrụ ahụ, ka ị nwee ike ịkekọrịta ya na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ ngwa izipu ozi. Ngwa a bụ n'efu mana enwere ụfọdụ ọrụ akwụ ụgwọ, nke na agbanyeghị anaghị emetụta ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwale ngwa ọdịnala vidiyo ndị ọzọ, anyị na-atụ aro ka ị gụọ isiokwu anyị. Kacha mma ngosi mmịfe onye ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo na iPhone.
Ebe nrụọrụ weebụ iji mepụta vidiyo ụbọchị ọmụmụ
Anyị achọghị iji mmemme na ngwa mepụta ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ vidiyo otu? N'okwu a, mepee ihe nchọgharị weebụ ọ bụla (gụnyere Google Chrome) ma mepee Kapwing, nchịkọta akụkọ vidiyo dị n'ịntanetị.
Ebe nrụọrụ ahụ na-arụ ọrụ na-enweghị ndebanye aha ma na-enye ngwaọrụ niile dị mkpa iji mepụta vidiyo achọrọ. Iji jiri ya, pịa bọtịnụ ahụ Pịa ka ibu bulite vidiyo maka edezi ma jiri ngwaọrụ ndị dị n'elu windo ahụ gbakwunye ederede, tinye ihe oyiyi ma ọ bụ egwu egwu; Ná ngwụsị nke ọrụ anyị pịa nnukwu uhie bọtịnụ mbupụ vidiyo na akụkụ aka nri dị elu iji budata vidiyo ọhụrụ ahụ, ka e wee nwee ike ịkekọrịta ma ọ bụ chekwaa ya na ebe nchekwa ngwaọrụ.
Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị maka ịmepụta ụbọchị ọmụmụ na vidiyo vidiyo na ntanetị bụ Clipchamp, nke e jiri ya tụnyere saịtị gara aga na-enye ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ na igbe.
Ozugbo ị debanyere aha na saịtị ahụ n'efu (anyị nwekwara ike iji akaụntụ Google ma ọ bụ Facebook iji nweta ngwa niile), anyị buliri vidiyo iji dezie ma họrọ otu n'ime ndebiri vidiyo dịnụ, iji chekwaa ọtụtụ oge. Na njedebe dị pịa Mbupụ n'aka nri dị n'elu iji budata ma ọ bụ kesaa vidiyo ahụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji saịtị ndị ọzọ na-edezi vidiyo vidiyo n'ịntanetị, anyị nwere ike ịga n'ihu na-agụ akwụkwọ na ndu anyị Online video Montage na video edezi saịtị na remixes na pụrụ iche utịp.
Iji mee vidiyo maka ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ nnọkọ ezinụlọ, ọ bụchaghị na anyị kwesịrị ịbụ ndị isi: iji ngwaọrụ ndị edepụtara n'elu anyị nwere ike jiri uru nke ndebiri ma ọ bụ ụdị dị njikere, otú i nwere ike bulite video na efego ya spectacularly na dị nnọọ ole na ole clicks ma ọ bụ taps. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị hụrụ n'anya edezi vidiyo, saịtị niile, ngwa na mmemme niile enyere anyị aka ime aka, iji gosipụta ihe okike anyị.
Iji mepụta vidiyo na-atọ ọchị ma mara mma ịkekọrịta na netwọkụ mmekọrịta, anyị na-atụ aro ka ị gụọ ntuziaka anyị Ngwa iji mepụta akụkọ site na foto na vidiyo vidiyo (Android - iPhone) mi Mepụta Looping Boomerang vidiyo ma dezie (gam akporo App).